A healthy sleep pattern ensures the next day full of energy esp for working adults and heavy load students. Sleep hygiene is a habitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. Ny fahadiovan'ny torimaso ratsy dia mety manakana ny kalitaon'ny torimaso. Hence considered most people lack healthy sleep we hope the below small tips useful before you go to bed.
Fanao matory tsara
Samy te hanana fahazarana ara-torimaso tsara ny rehetra, fa miaraka amin'ny fampandrosoana ny teknolojia, the quality of people's sleep has been declining. Noho izany, inona ireo lafin-javatra misy fiantraikany amin'ny kalitao matory? Inona no dingana azontsika atao mba hanatsarana ny kalitao matory? Raha ny tena izy, Ny kalitaon'ny torimaso dia mifandraika amin'ny tontolo ivelany sy ny fomba fihinanao sakafo, ao anatin'izany ny tontolo iainana, fotoana, hetsika sy fandraisana.
Aiza isika no matory dia tokony tsara ho an'ny torimaso. Tokony hangina ny efitrano, maizina sy malefaka amin'ny hafanana. Raha afaka matory fotsiny mandritra ny andro noho ny asa, Mampiasà jamba marobe, shadows, or curtains. Atỳ, if the light comes in through the window, it won't hit your eyes. Ho an'ny olona tsy matory ao anaty tontolo milamina, afaka milalao mozika mampitony ianao manampy anao hatory.
Ny fandriana dia ampahany lehibe amin'ny tontolo fatoriana. This includes pillow-top mattresses, fanoratana sy fandriana. Ny kidoro dia tokony hanohana, izay mety hampihena ny fanerena miaraka. Ny lamosina sy ny tendany dia tokony hitoetra tsara. Ny fampandrosoana ny fananganana maoderina maoderina dia mikendry ny handanjalanja tsara eo amin'ny fanohanana sy ny famoahana tsindry. Rehefa misafidy matotra, diniho ny lanjanao sy ny karazana vatanao ary ny toe-batanao, anisan'izany ny fanaintainana miverina, fanaintainana amin'ny tendany, vanin-taolana, bursitis, apnea natory, ary fibromyalgia.
Ny vatantsika dia namboarina tamin'ny gadona boribory, tsingerina 24 ora rehefa mitsangana isika ary mianjera, Miankina amin'ny tsy miovaova. Rehefa tonga tany amin'ny toerana maro tamin'ny zona maro nandritra ny ora maro izahay, Tsy afa-bela taminay ny fotoana nijanonanay tany amin'ilay toerana. Izahay dia hiteraka jet lag noho ny fiovan'ny fotoana. Raha miova fiovàna ianao isaky ny herinandro, manomboka manitsy ny fotoana fatorianao haingana araka izay azo atao.
Eo anelanelan'ny roa ka hatramin'ny efatra ora alohan'ny hatoriana, mihetsika amin'ny hetsika henjana mankany amin'ny asa mangina no ahafahanao manomboka miala voly. Fanatanjahan-tena mandritra ny andro ary mampihena ny fanatanjahantena mafy amin'ny alina. Tapaho ny antsasaky ny ora iray amin'ny ora alohan'ny hatoriana, mamaky boky na mijery sary, ary aza atao ny mikasika ireo fitaovana fanaraha-maso elektronika. Raha ilaina, afaka miala sasatra mandritra ny andro ianao ary mametra ny fialan-tsasatra amin'ny sakafo antoandro 30-45 minitra mba tsy hisy fiantraikany amin'ny torimasanao mahazatra.
Ny sakafo ataontsika eo akaikin'ny fotoana fatoriana dia misy fiantraikany amin'ny fomba fatoriantsika. Raha noana ianao adiny iray alohan'ny hatory, avelao hanomana sakafo maivana, but not suitable for high-calorie foods, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny ora sy ny torimaso. Kafe sy zava-pisotro misy kafe hafa dia mahafinaritra ny mifoha amin'ny maraina, satria manampy azy ireo mifoha ianao, fa noho io antony io ihany, tsy safidy tsara izy ireo mandritra ny telo na efatra ora fandriana.
Ireo zavatra tsy voafehintsika
Ny zavatra maro misy fiantraikany amin'ny fomba fatoriantsika dia eo ambany fifehezantsika. But when we can't control certain key components of sleep hygiene, mila manao fanitsiana isika raha te hahita torimaso tsara. Ho an'ny ankamaroantsika, Ny iray amin'ireo antony ihezan'ny hafa ny asantsika sy ny fotoam-pianarana. Raha afohezina, mahazo matory tsara kokoa ary miambina antsika sy mailo mandritra ny andro, we need to control what we can do and adjust what we can't. Azo antoka, a good mattress will help you sleep well, too. Noho izany, we recommend this model - spring and memory foam hybrid mattress to these who are troubled in sleeping.
Tags: Buy sofa set, Kidoro amin'ny lohataona
Fotoana fandefasana: 2020-04-15